राजनेता पनि देखियो । दार्शनिक पनि देखियो, पढियो सुनियो । तर राजनेता र दार्शनिक अनि चुनावी अभ्याससहित भएको विलक्षण प्रतिभायुक्त व्यक्ति रूपचन्द्र विष्ट (रुदाने) सँग सङ्गत र सहकार्य गरियो । यो नै जीवन सार्थक भएको महसुस भएको छ । अरू र रुदानेमा फरक यति टाढा छ सो वर्णन गरिसाध्य छैन ।
रुदानेले कहिल्यै आफ्नो जन्मोत्सव मनाउनु भएन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सव मूल समारोह समितिमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको हैसियतमा सदस्य राखेछन् । उहाँलाई सोको चिठी आयो । रुदानेले सो चिठी ल्याउने व्यक्तिलाई सोही चिठीको पृष्ठभागमा “आयोजक ! जिउँदो मान्छे अदालतमा लडिरहेको मुद्दा हो, यसको फैसला चिहानमा पुगेपछि मात्र हुन्छ । त्यसैले मैले आफ्नो जन्मोत्सव मनाउने गरेको छैन । जसले आफ्नो जन्मोत्सव मनाउँदैन उसलाई अरूको जन्मोत्सव मनाउने हक हुँदैन” रापंस (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य) लेखी सो पत्र फिर्ता पठाइदिनु भयो । यस विषयलाई लिएर तत्कालीन पञ्चले रुदानेलाई कारबाही गरिनुपर्छ भनी पञ्चनयत नीति जाँचबुझ समिति (पनिजाबुस) मा उजुरी हाले र जन्मोत्सव समारोहमा भाषण पनि गरे । पनिजाबुसका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले रुदानेलाई स्पष्टीकरण सोधे तर रुदानेले सो पत्रको पृष्ठभागमा लेखेको कुरा नै स्पष्टीकरण हो भनी जवाफ दिनुभयो ।
यसभित्र ठूलै सैद्धान्तिक, दार्शनिक र राजनीतिक कुरा छन् । के कुनै मान्छे जन्मेको कारण समाज र मानव जातिलाई कति सकारात्मक प्रभाव प¥यो ? त्यसअनुसार पो उत्सव मनाउने हो । नकारात्मक प्रभाव परेमा त शोक मनाउनु पर्ने हो नि । तर दुष्ट मनुष्यले पनि उत्सव मनाउने, अरूले हो हो गर्ने काम किन प्रचलन भयो ? यो प्रश्नको उत्तर दिन अहिलेका जन्मोत्सव मनाउन केक काटेर प्रचार गर्नेले सक्दैनन् । निरङ्कुश राजतन्त्रमा चलेको कालोे व्यवस्थामा रुदानेले तत्कालीन शासकलाई उत्तर दिनुभयो । यसै गरी बडामहारानीको जन्मोत्सवमा रुदानेको नाममा एक चिठी आयो । स्मारिका प्रकाशन गर्न लागेकोले बडामहारानीको बारेमा एक लेख मागियो । यसमा रुदानेले एक कागज माग्नुभयो र लेखिदिनु भयो “ऐराल एक ठूलीबढी आइमाई हुन् किनकि उनले राजासँग विवाह गरिन् । रुदाने ” यसमा कम आँटको कुरा छैन । मै हुँ भन्ने हालका नेताले पनि यो साहस गर्न सक्दैनथे । यसमा पञ्च कराउन हिम्मत गरेनन् किनकि यसमा कागज छुट्टै थियो । ऐरालको अर्थ (ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी) लगाउनु पर्दथ्यो । अनि राजासँग विवाह भनेको कुन राजा ? बडामहाराजधिराज श्री ५ पो संवैधानिक राजा हुन् अरू त सयौँ राजा हुन्छन् नि आदि तर्क वितर्क उठ्यो ।
एकपटक दरबारको विरुद्धमा रुदानेले राष्ट्रिय पञ्चायतमा भाषण गर्नुभयो । अनि पञ्चले नियमापत्ति गर्दा रुदानेले जवाफ दिनुभएको थियो “दरबार त मुलुकमा धेरै छन् । सिंहदरबार, बागदरबार, सेतो दरबार, लाल दरबार आदि तर श्री ५ महाराजधिराजको दरबारलाई त राजप्रासाद पो भनिन्छ त ! यत्ति कुरा नबुझ्ने मण्डले दलाली गर्न व्यस्त छन्” भनी जवाफ दिनु भएको थियो । यो कुरामा पनि ती पञ्चले आपत्ति गर्ने आँट गरेनन् । यो कुरा नै मेरो सूत्रबद्ध लेख हो छाप भनी पत्रवाहकलाई नै फिर्ता पठाइदिनुभयो ।
अहिले आफैँले आफैँलाई माननीय भन्न रुचाउनेको हुल बढ्दो छ । अझ सामन्ती सोच भएकाले त सम्माननीय किन नभनेको भनी संसद्मा आपत्ति जनाउँछन् । सम्माननीय शब्द राजतन्त्रसँग सम्बन्धित छ । सामन्त प्रथासँग सम्बन्धित छ, जसरी अधिराज्य भन्ने शब्द राजतन्त्रसँग सम्बन्धित छ । बेलायतले ‘राइट अनेरेवल’ भन्ने चलन चलायो । ‘अपर हाउस’, ‘लर्ड हाउस’ भन्ने शब्द प्रयोग ग¥यो । यी सबै सामन्ती सोचका कुरा हुन् ।
रुदानेलाई कसैले माननीय भनेर सम्बोधन गरेको अवस्थामा उहाँले सोध्नु हुन्थ्यो – जनता जाननीय भए ? यदि जनता जाननीय भएका छैनन् भने तिनको प्रतिनिधि माननीय हँुदैन । जब जनता जाननीय हुन्छन् तब तिनको प्रतिनिधि माननीय हुन्छ । यो जनतन्त्रसँग सम्बन्धित छ । भारतमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय भनिँदैन । राष्ट्रपतिलाई पनि सम्माननीय भनिँदैन । चीन, अमेरिकामा पनि भनिँदैन । तर बेलायतमा भनिन्छ किन ? सामान्य जवाफ छ । तर नेपालमा किन यस्तो भनिन्छ ? नेपालमा राजतन्त्र थियो । बेलायतको जस्तै ‘प्रिभी काउन्सिल सट्टामा राजपरिषद् वा राजसभा थियो । तिनका सदस्यलाई सम्माननीय भन्ने प्रचलन राजाले बेलायतलाई हेरेर गरेका थिए । यो अब पनि जोगाउने मानसिकतामा रहेकाले रुदानेलाई सम्मान गर्न सक्ने अवस्थै रहेन । रुदानेको सम्मान पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा गरियो । किनकि केपी ओली यो दर्शनमा पनि विज्ञ हुनुहुन्छ ।
जीवन विषयी बुद्धिजीवीबाट बौद्धिक स्वतन्त्रताको प्रयोगकारी परिवर्तन र
नारीबाट सामाजिक परिवर्तन पाइने मुख्य मुहान भएकोले जनमुखी राजनीति सञ्चालन–परिचालन गर्दै स्वचालनमा पु¥याऔँ ।
यी सूत्र आज बहुदल हँुदै सङ्घीय गणतन्त्र हुँदाका अवस्थामा समेत प्रयोग भएको छैन । बजेट यहीअनुसार बन्नुपर्ने हो । सरकारको कार्यनीति कार्यक्रम यही नीतिअनुसार हुनुपर्ने हो । तर यतापट्टि कसैको ध्यान गएको छैन । समाजका यी चार समूहको बारेमा केन्द्रविन्दु बनाएर बजेट नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हो ।
२०३९ सालमा रुदानेले प्रश्न गर्नुभयो, जात ठूलो कि जनता ? नाता ठूलो कि
न्याय ? स्वार्थ ठूलो कि सत्य ? यो प्रश्न अहिलेका दल र नेतालाई पनि उत्तिकै महìवको छ । त्यस बेलाका शासकलाई आपत् पर्नेगरी नारा दिनुभयो । त्यो बेला केटाकेटी, नेता, व्यवस्था, अगुवा सारा बिग्रिएको देखेर उहाँले भन्नुभयो – “केटाकेटी बिग्रे आमाबाबु दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी, व्यवस्था बिग्रे अगुवा दोषी अनि यथार्थमुखी कर्तव्यमुखी बाहेक पछुवा भगुवा सारा दोषी । ”
त्यो व्यवस्था बिग्रेको थियो । त्यो व्यवस्थाको अगुवा (राजा) बिग्रेको थियो । अहिलेका दल र नेताले यो मनन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । नत्र काम एकाथरिलाई, कमाई अर्कोथरिलाई हुने समाजवादको उल्टो व्यवस्था चलिरहन्छ । त्यसैले अहिलेका दल र नेताले तलको भनाइलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ –
“थाहासँग प्रेम गर, थाहा तिमीकहाँ आउँछ । थाहाप्रति इमान राख कर्तव्य तिमीकहाँ आउँछ, कर्तव्य हो जिन्दगीको सक्कल । ” रुदाने
यही कुरामा ध्यान जाओस् र रुदानेलाई सम्झना राज्यले गरोस् । यो देश सप्रेमा वा बिग्रेमा दोष अहिलेको नेतृत्वलाई जान्छ । यो कुरा रुदानेले २०२९ मा राजालाई लक्ष्यित गरी अञ्चलाधीशलाई बयान दिँदा भन्नुभएको थियो । “जो जति शक्तिमा छ, समाज सप्रे बिग्रेमा, त्यो त्यति जिम्मेवार छ । ” यो कुरा अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा लागू हुन्छ । रुदानेको स्मरण गर्दै यो विषय याद गरौँ ।